Samsung iyo Apple ka dib,Ma taqaan shirkadda 3aad ee dhanka telefoonnada ugu horreysa? – Radio Muqdisho
Shirkadda Samnsung ee laga leeyahay dalka Koofurta Kuuriya ayaa leh suuqa ugu weyn ee telefoonnada gacanta, waxaana kaalinta labaad ku jirta shirkadda Apple ee laga leeyahay Mareykanka, taas oo uu tartan xooggani kala dhexeeyo Samsung.
Maxaad haddaba ka taqaanaa shirkadda 3aad ee leh suuqa ugu weyn ee telefoonnada, waxaa laga yaabaa in aad ku fikirto in ay tahay Nokia, Lenovo,Motorolla ama Sony, laakiin intuba kuma jiraan kaalinta saddexaad.
Waligaa ma maqashay shirkad lagu magacaabo “Xiaomi”? waa shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha. Raasumaalkeeduw aa 45 billion oo Dollar oo u dhiganta isu geynta raasumaalka shirkadaha kala ah SONY,LG iyo Motorolla.
Afartii bilood ee u dambeysay waxay shirkadda Xiaomi iibisay 17 Million oo telefoon.